Igumbi leeNdaba - Stellenbosch University Language Centre
Wamkelekile kwiGumbi leeNdaba lakwiZiko leeLwimi!
Apha ungafunda konke malunga noko besikwenza – ngesiNgesi, ngesi-Afrikansi okanye ngesiXhosa. Ungaphengulula neekhathegori zethu zeendaba apha ngezantsi. Tsiba uze ungene ube kunye nathi kuhambo olungothungelwano.
Ileta yethu yeendaba yangekota, i-Dialogos, amanqaku ayo iwaqokelela kwiGumbi leeNdaba. Funda ushicilelo lwakutsha-nje lweDialogos apha uze ubhalisele ileta yethu yeendaba apha.
AllAmanqaku abhalwe ngesiXhosa4Dialogos32Iilwimi zethu24Iindaba zakutsha-nje35Iingcebiso ngokubhala5ILebhu yezoNxibelelwano1ILebhu yokuBhala3Inkxaso ngolwimi lwakwi-intanethi2Isigama2Izifundo2Izifundo zesi-Afrikansi3Uphando9
Ukunwenwa kweziphumo zolwimi
Uninzi lwethu alucingi kangako malunga nolwimi ngokwengqiqo ekuphileni kwethu ubomi bethu bemihla ngemihla. Kwaye noko kunjalo, ulwimi esilusebenzisa kwizifundo zethu, kwiimeko zasemisebenzini nakubudlelwane bethu buqu nabanye abantu lulo olwakha uhlobo…
Iminyaka engamashumi amabini yenkxaso kubabhali ukuze bavakale apho kufaneleke khona
Kulo Juni, iLebhu yokuFundisa ngendlela yokuBhala ekwiZiko leeLwimi eSU ibhiyozela iminyaka eyi 20 yasungulwa! iLebhu yokuBhala iyazingca ngobubele enabo, ukwamkela nendawo ekhuselekileyo apho abafundi nezifundiswa besoloko beziva bekhululekile ngokuxoxa ngemiba…
uSuku lwe Afrika ka2021: Isipho soqhagamshelwano
Inyanga kaCanzibe iqatshelwa njengenyanga yobu-Afrika. Olona suku lobu-Afrika lubhiyozelwa ngomhla wama25 kuCanzibe ukukhumbula ukusekwa koMbutho woManyano lobuAfrika (Organisation of African Unity) ekungoku nje waziwa njengoMbutho wobuAfrika (African Union) ngomhla wama25 kuCanzibe ngo-1963…
Yonwabela inkululeko eziswa lulwimi
22 Apr at 6:07 pm
Yiba nomfanekiso ngqondweni ngehlabathi elingenalo ulwimi. Ingakwazi ukwenzeka lo nto xa ucinga? Awucingi ukuba ingenzeka lo nto?Awukhe uyicinge eyokuba ulwimi luthungelana neengcinga kwaye ayisebenzi eyokucinga ukuba ngaba awucingi ngolwimi lwakho? Uza kufikelela njani kwiingcinga zakho ukuba ngaba azizinzanga kuhlobo oluthile lolwimi?
Masenze iziqhakancu sibhiyozele umhla waMalungelo oLuntu
Ngomhla wama 23, uMphathiswa wezobuGcisa neNkcubeko uMnu Nathi Mthethwa wabhengeza ukuthiywa ngokutsha kwezixeko ezifana neBhayi (iGqeberha); iMaclear (iNqanqarhu) neKing Williams Town (iQonce). Uninzi lwabantu abangazamiyo nokubizela oonoqhakancu, phakathi kwabo kukho…
Masikhuthaze ukuxatyiswa kweelwimi ezahlukileyo
Minyaka le, ngomhla wama-21 kweyoMdumba, ihlabathi lonke ngokubanzi libhiyozela uSuku loLwimi lweeNkobe kwiHlabathi ngokubanzi. Ukusukela kuloo nyaka ke, amazwe ngamazwe ehlabathi, ingakumbi abathandi bolwimi, babhiyozela iilwimi zeenkobe ngendlela ngeendlela ezahlukileyo
It is with the utmost shock and sadness that we heard the news on Sunday 6 December that Pumlani Sibula had passed away. He had been recovering from Covid-19 at…
USharifa Daniels, omnye weqela labasebenzi ongumseki kwiLebhu yokuBhala yeZiko leeLwimi, wathatha umhlalaphantsi ngo-2018, emva kweminyaka ephantse ibe li-17 yokubonelela ngeenkonzo kubabhali basekhampasi. Sathatha isigqibo sokuba simwonge ngoshicilelo olukhethekileyo lweziQinisekiso zaMaphepha…
Ukuba iliso lakho besele lidibene nencwadana ye-Woordfees yalo nyaka – nje ngabalandeli be-Woordfees abaninzi – ungabe ubukhe wadibana nentengiso yeZiko leeLwimi kunye neengcebiso zokubuza indlela ngesiXhosa. Elo phepha liphela ngentetho…
Kwabaninzi ixesha lemibhiyozo yangeeholide zehlobo lihambisana kunye neentlangano zosapho. Kwangaxeshanye, kungumthetho ongabhalwanga ukuba uzakuphikisana nesalamane esingasondelanga kuwe okanye – okubi nangakumbi –nisuke nje niphelelwe zizinto eninokuzithetha. Kutsho kuthi cwaka kuphel’…